» ब्राजिलका राष्ट्रपति भन्छन् !कोरोना खोपले मान्छे गोहि बन्नसक्छ,महिलाको दाह्री आउन सक्छ! तर कसरी ? हेर्नुहोस ब्राजिलका राष्ट्रपति भन्छन् !कोरोना खोपले मान्छे गोहि बन्नसक्छ,महिलाको दाह्री आउन सक्छ! तर कसरी ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
ब्राजिलका राष्ट्रपति भन्छन् !कोरोना खोपले मान्छे गोहि बन्नसक्छ,महिलाको दाह्री आउन सक्छ! तर कसरी ? हेर्नुहोस
2020, December 19th, Saturday
admin 717 Views
ब्राजिल । कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर नबनेको भन्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो आलोचित बनिरहेका बेला उनले हालै कोभिडविरुद्धको खोपबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
फाइजर कम्पनीको भ्याक्सिनले यसको गलत असर देखिएमा आफू जिम्मेवार नहुने भनेपछि बोल्सोनारोले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।उनले यसअघि पनि कोरोनाभाइरसलाई साधारण रुघाखोकी मात्रै भएको भन्दै विवादित बनेका थिए ।
यद्यपि भ्याक्सिनको परीक्षण ब्राजिलमा पनि भइरहेको छ । ब्राजिलसँग चिनियाँ र अरु केही औषधि कम्पनीले सम्झौता गरेका छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोनाको असर पर्ने देशमध्ये ब्राजिल पनि एक हो ।
जहाँ अमेरिकापछि धेरै मृ’त्यु भएको हो । अर्थात् यहाँ १ लाख ८५ हजार भन्दा धेरैको मृ’त्यु हुनुका साथै ७१ लाख भन्दा धेरे संक्रमित भइसकेका छन् । त्यसो त ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारो र उनकी पत्नी समेत यसअघि नै कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भइसकेका हुन् ।
३ साताको उपचारपछि निको भएका बोल्सोनारोले कोरोना र यसको खोपबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदैआएका छन् ।